Valan’aretina COVID-19 ao New York City - Wikipedia
Ny tranga voalohan’ny valan’aretina COVID-19 dia voamarina tao New York City (Etazonia) tamin’ny Martsa 2020. Vehivavy iray avy any Iràna, firenena izay efa rakotr’ilay valan’aretina tamin’izany fotoana, tonga tao New York City no nahitana ilay trangan’aretina. Iray volana taorian’izay dia io tanàna io ihany no faritra voalaza fa niroboroboan’ilay valan’aretina be indrindra tao amin’ny firenena. Ny volana Aprily dia efa nihoatra ny tany Sina sy ny tany Fanjakana Mitambatra ary ny tany Iràna ny isan’ny trangan’aretina coronavirus tao amin’io tanàna io. Ary ny volana May kosa dia efa nihoatra ny an’ny firenena hafa rehetra izany isa izany. 
Ny 20 Martsa dia namoaka didy ny biraon’ny governora fa mikatona avokoa ny sampan-draharaha tsy voatsokajy ho tena ilaina rehetra. Ny fitaterana kosa mbola nitohy kanefa feno olona noho ny fihenan’ny isan’izy ireo sy ny fitombohan’ny isan’olona tsy manam-ponenana mitady fialofana any amin’ny seranana ambanin’ny tany. 
Ny volana Aprily dia efa amana hetsiny ny mponina tao New York no very asa ary efa amin’ny lavitrisa ny tombana ny fihenan’ny hetra. Ireo asa kely karama amin’ny sehatry ny fivarotana, fitaterana sy trano fisakafoanana no tena voa indrindra. Ny fihenan’ny vola miditra, ny hetra avy amin’ny fivarotana sy ny fizahan-tany toy ny tranom-bahiny, dia manodidina ny 10 lavitrisa dolara. Ny ben’ny tanàna Bill de Blasio dia nanambara fa rava ny rafitra misahana ny tsy fananan’asa noho ny fitakiana misamboaravoara. Ary mila fanampiana avy amin’ny Fanjakàna mba hanohanana ireo sampan-draharaha fototra.
Ity trangan’aretina ity no loza niteraka fahafatesana be indrindra tamin’ny tantaran’ny tananàn’i New York.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Valan’aretina_COVID-19_ao_New_York_City&oldid=1002350"
Voaova farany tamin'ny 10 Martsa 2021 amin'ny 04:34 ity pejy ity.